विश्‍वका धेरै देशमा पीपीई अभाव, प्लास्टिक र रेनकोटको भर- विश्व - कान्तिपुर समाचार
विश्‍वका धेरै देशमा पीपीई अभाव, प्लास्टिक र रेनकोटको भर
व्यक्तिगत सुरक्षा कवचको अभाव भएपछि बेलायत, स्पेन, इटाली, भारतलगायत देशका अस्पतालमा जोखिम मोलेर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै स्वास्थ्यकर्मी
चैत्र २९, २०७६ एजेन्सीहरु
लन्डन — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या लगातार बढ्दै गएपछि उपचारमा संलग्न विश्वका कतिपय देशका स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पीपीई) अभाव भएको छ ।
बेलायतका कतिपय अस्पतालले सघन उपचार कक्षका शय्याहरू थपिरहेका छन् । तर त्यसमा कार्यरत चिकित्सक, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीका लागि भने उनीहरूले पर्याप्त ध्यान दिएका छैनन् । फलस्वरूप स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिम मोलेरै संक्रमितको उपचारमा संलग्न छन् ।
बेलायतका केही अस्पतालका सघन उपचार कक्षका चिकित्सकले देशमा केही स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षा साधनको अभाव झेलिरहेको बताएका छन् । बीबीसीका अनुसार केही स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरूको अस्पतालमा उपकरण अभाव भए पनि मिडियासँग कुरा नगर्न चेतावनी दिइएको जनाएका छन् ।
बेलायतको मिडल्यान्डस्थित एक अस्पतालकी चिकित्सकले आफ्नो परिचय गोप्य राख्ने सर्तमा कोभिड–१९ ले संक्रमितले सघन उपचार कक्ष भरिएको एक अस्पतालबारे बताइन् । अस्पतालका सबै शल्यक्रियाहरू पछि सारिएका छन् भने क्यान्सर क्लिनिकसमेत रद्द गरिएको छ । उनका अनुसार अस्पतालमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी छैनन् र भेन्टिलेटर तथा सामान्य एन्टिबायोटिक्स्को पनि अभाव छ ।
प्रत्येक सिकिस्त बिरामीहरू दिनमा १३ घण्टासम्म हेरिरहेका नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) का स्वास्थ्यकर्मीहरूले पीपीईको अभावमा रेनकोट, प्लास्टिकका फोहोर राख्ने झोला, प्लास्टिकका एप्रोन र स्की खेल्दा लगाइने चस्माको सहारा लिएका छन् ।
बेलायत हाल लकडाउनको अवस्थामा छ । अत्यावश्यक सेवामा खटिने मानिसलाई सकभर दुई मिटरको दूरी राख्न भनिएको छ । आममानिसलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न अनुरोध गरिएको छ । तर संक्रमितको परीक्षण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने स्वास्थ्यकर्मी भने असुरक्षित छन् ।
जटिल अवस्थाका भाइरसको संक्रमितको उपचार हुने सघन उपचार कक्षका नर्सहरूलाई कुनै सुरक्षा प्रदान नगर्ने टोपी लगाएर काम गर्न भनिएको ती चिकित्सकको भर्ना छ । ‘त्यसकारण हामी प्लास्टिकका झोला वा एप्रनले टाउको छोप्न बाध्य छौं,’ उनी भन्छिन् ।
बेलायत सरकारले सुरक्षा सामग्री वितरण प्रणालीमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय वितरण टोलीले स्वास्थ्य उपकरणहरू सबै अस्पतालमा तत्काल पुर्‍याउने बताएको छ । एनएचएसले भने पीपीईबारे हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । उसले गतसाता १० लाखभन्दा बढी मास्क वितरण गरिएको जनाएको छ ।
ती चिकित्सकका अुनसार त्यसरी वितरण गरिएका मास्कमा पनि प्रयोग गर्ने म्याद थपिएको थियो । जनस्वास्थ्य कार्यालयले मौज्दात रहेका कतिपय सामग्री राम्ररी परीक्षण गरी बाँडिएको जनाएको छ । तर यसमा कतिपय चिकित्सक भने विश्वस्त छैनन् ।
इन्‍डोनेसियाली चिकित्सकहरु रेनकोट लगाएर कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिँदै तस्बिर : रोयटर्स
हालसम्म कति स्वास्थ्यकर्मीहरू कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना भए भन्ने एनएचएससँग पनि तथ्यांक छैन । तर भाइरसका कारण ब्रिटेनमा केही स्वास्थ्यकर्मीको भने मृत्यु भइसकेको छ ।
त्यसैगरी, स्पनेको मड्रिड र बार्सिलोनाका सघन उपचार कक्षमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पीपीई अभाव छ । स्पेनमा मार्च अत्यसम्म ९ हजार ४ सय स्वास्थ्यकर्मी कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएका छन् ।
इटालीको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र लोम्बार्डी, राजधानी रोमका चिकित्सकले पनि पीपीई तथा सुरक्षित मास्कको अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका जनाइएको छ । इटालीमा गत सातासम्म ६ हजार ४ सयजना स्वास्थ्यकर्मी कोभिड–१९ बाट संक्रमित भइसकेका छन् ।
भारतमा पनि अभाव
भारतमा पनि पीपीईको अभाव भएपछि कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार संलग्न चिकित्सकले प्लास्टिक, रेनकोट तथा हेल्मेट लगाउने गरेका छन् ।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार राजधानी नयाँदिल्ली, मुम्बई, कोलकातालगायत सहरका दर्जनौं चिकित्सक सुरक्षित मास्क तथा पीपीईबिना नै कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिएका छन् ।
कोलकाताको बेलियाघाटा आईडी अस्पतालमा कोरोना उपचारमा खटाइएका डाक्टरहरूले आफूहरूलाई प्लास्टिकका रेनकोट दिइएको जनाएका छन् । उपचारका क्रममा उनीहरूले ती रेनकोट लगाएका तस्बिरहरूसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।
कतिपय चिकित्सकहरूले यस्तो अवस्थामा आफूहरूले काम गर्न नसक्ने बताए । एक चिकित्सकले भने, ‘हामी ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्न सक्दैनौं ।’ अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.आसिस मन्नाले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
त्यसैगरी, हरियाणाको ईएसआई अस्पतालका चिकित्सक सन्दिप गार्गले आफूसँग एन–९५ मास्क नभएकाले हेल्मेट लगाउने गरेको बताए । उनले भने, ‘मैले सर्जिकल मास्क र हेलमेट लगाउने गरेको छु । यसको भाइजरले मेरो अनुहार पनि छेक्छ ।’
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीईलगायत सुरक्षा सामग्रीको अभाव देखिएको जनाउँदै दक्षिण कोरिया र चीनबाट ल्याउने बताएका थिए । तर हालसम्म पनि त्यस्ता सामग्री भने ल्याइएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूटीओ) का अनुसार कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले अनिवार्य रूपमा पीपीई लगाउनुपर्छ । यसबारे आफ्नो प्रश्नमा भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै जवाफ नदिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।
मास्क र सेनिटाइजरको पनि अभाव
कतिपय देशमा मास्क तथा सेनिटाइजरको समेत अभाव भएको छ । गत साता जर्मनीले आफ्नो देश ल्याउन लागिएका २ लाख मास्क अमेरिकाले बाटैमा कब्जा गरेको जनाएको थियो । बर्लिनस्थित एक स्थानीय सरकारले मगाएका ‘एफएफपी–२’ मास्क बैंककमा जफत गरिएको थियो । बर्लिनका आन्तरिक मामिलामन्त्री आन्द्रियास गिजेलले ती मास्क अमेरिकातर्फ लगिएको दाबी गरेका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरियाली युद्धकालीन कानुन ‘डिफेन्स प्रोडक्सन एक्ट’ लागू गर्दै मेडिकल सामग्रीको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने अमेरिकी कम्पनीलाई घरेलु माग धान्न बाध्य पारेका थिए । जसका कारण अमेरिकी अधिकारीले ती मास्क बाटैबाट कब्जा गरेका हुन् ।
ट्रम्पका अनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले कम्तीमा करिब २ लाख ‘एन–९५’ मास्क, १ लाख ३० हजार सर्जिकल मास्क तथा ६ लाख पन्जा जफत गरिसकेका छन् । जर्मनमन्त्री गिजेलले विश्वव्यापी संकटका बेला अमेरिकाले गरेको जबरजस्ती उचित नभएको बताउँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी, युरोपेली देशका अन्य नेताहरूले पनि मास्क तथा मेडिकल सामग्री अभाव भएको बताउने गरेका छन् । फ्रान्सको ले–दे–फ्रान्स क्षेत्रका सभापति भेलेरी पेक्रेसेंले मास्क अभाव भए पनि बढी मूल्य तिरेर खरिद गरेको जनाएका छन् । युरोपमा महामारी फैलिएसँगै मास्क तथा अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीको भाउ अकासिएका उनको भनाइ छ ।
डेनमार्कले गत साता चीनबाट ४ लाख मेडिकल मास्क तथा कोभिड–१९ परीक्षण किट मगाएको थियो । तर ती बीच बाटोबाटै अन्यत्र पुर्‍याइएपछि आफ्नो देशमा अभाव कायमै रहेको डेनमार्कको भनाइ छ । संक्रमण फैलिएसँगै पीपीई, मास्क, परीक्षण किट लगायतका मेडिकल सामग्री अभाव भएपछि इटाली र स्पेनले चीनसँग मगाएका थिए । तर ती गुणस्तरहीन भएपछि फिर्ता गरेका थिए ।
प्रकाशित : चैत्र २९, २०७६ ०९:३८
भारत-पाकिस्तानबीचका सम्झनलायक एकदिवसीय १० खेल
चैत्र २८, २०७६ एजेन्सीहरु
काठमाडौँ — लन्डन– क्रिकेटमा दक्षिण एसियाका छिमेकीद्वय भारत र पाकिस्तान भिड्नुपर्छ, त्यसको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । कुनै समय एकै देशका रुपमा थिए, यी दुई । पछि छुटिएका थिए । त्यसको राजनीतिकदेखि सामाजिक बाछिटा अझै पनि यी दुई देश भिड्दा मैदानमा देखिन्छ ।
भारत र पाकिस्तानले एकदिवसीय क्रिकेटमा निकै सम्झनलायक खेल खेलेका छन् । त्यसमध्ये उत्कृष्ट १० यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास भएको छ, ईएसपीएन क्रिकइन्फोले तयार पारेको यसैसम्बन्धी खेलेको आधारमा ।
शारजहाँ, १९८५, फोर नेसन्स कप
भारत ३८ रनले विजयी
यो त्यो समय थियो, जतिबेला टेस्ट क्रिकेटको तुलनामा एकदिवसीय विस्तारै बढी लोकप्रिय हुन थालेको थियो । भारत र पाकिस्तानबीचको यो खेल पनि उत्तिकै रोमाञ्चकारी थियो । यो खेलको विशेषता थियो, कम स्कोर । दुवै टिमको जोडेर जम्मा २ सय १२ रन । इमरान खानले १४ रनमा ६ विकेट लिएपछि भारत १ सय २५ रनमै अलआउट भयो । तय जस्तै देखिएको थियो, भारत नराम्रो ढंगले हार्नेछ । तर होइन, पराजित हुने टिम रह्यो पाकिस्तान । किनभने यो टिम ८७ रनै अलआउट भयो । पछिल्ला ४ विकेट २ रनमा गुमाएर ।
शारजहाँ, १९८६, अस्ट्रल–एसिया कप फाइनल
पाकिस्तान १ विकेटले विजयी
सधैं सधैं दोहोरिएर आउने खेलको कथा हो यो । अनि कथा सुरु हुन्छ, जाभेद मियादादले छक्का प्रहार गरे । कुल ५ टिमको प्रतियोगितामा पाकिस्तान र भारत नै फाइनल पुगेका थिए । साथी ब्याट्सम्यानले लगातार विकेट गुमाइरहे पनि मियादादले शतक बनाए । अन्तिम बलअघि एक विकेट बाँकी थियो, अनि जितका लागि बाउन्ड्री नै चाहिने अवस्था । चेतन शर्माको फुलटस बलमा मियादादले मिडविकेटतिर छक्का प्रहार गरे । उनी त्यो खेलका नायक थिए । अनि भए पाकिस्तानी क्रिकेटकै एक लिजेन्ड खेलाडी ।
कोलकाता, १९८७, दुईदेशीय शृंखला
पाकिस्तान २ विकेटले विजयी
इडेन गार्डेनमा भएको यो खेल पनि कम्तीको नाटकीय थिएन । सलिम मलिकले त्यसमा सन् ८० को जमानामा गज्जब लाग्न सक्ने पाराको ८० रन बनाएका थिए । त्यतिबेला ७२ रन बनाउनका लागि २ सय प्रतिशतको स्ट्राइक रेट कल्पना पनि गर्न सकिन्नथ्यो । तर मलिकले लगभग यस्तै खेले । जितका लागि ४० ओभरमा २ सय ३९ रन पछ्याइरहेको पाकिस्तानका लागि मलिक क्रिजमा आएका बेला स्कोर ५ विकेटमा १ सय ६१ रन थियो । मलिकले चारैतिर बल प्रहार गरे । एकदिवसीय इतिहासकै एक उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे ।
हैदराबाद, १९८७, दुईदेशीय शृंखला
स्कोर टाई, भारत कम विकेट गुमाएकाले विजयी
यो त्यस्तो समयको खेल थियो, जतिबेला पाकिस्तानी टिमले ढुक्कसँग भारतमा दुई महिना बिताउने गर्थ्यो । त्यही बेलाको तेस्रो खेलको कथा हो यो । यसअघिका दुई खेल पाकिस्तानले जितिसकेको थियो । यसमा भने पाकिस्तानलाई खेल जित्न अन्तिम बलमा २ रन आवश्यक थियो । क्रिजमा थिए, अब्दुल कादिर । उनले एक रनमात्र बटुल्न सके र दोस्रो रन लिने चक्करमा रनआउट भए । यस्तोमा खेल टाई भयो । तर त्यतिबेलाको नियमअनुसार कममात्र विकेट गुमाएको हुनाले जित भारतको पक्षमा गयो ।
बेंग्लोर, १९९६, विश्वकप क्वाटरफाइनल
भारत ३९ रनले विजयी
सन् १९९२ को विश्वकप छाड्ने हो भने सबै संस्करणमा भारत र पाकिस्तान एक आपसमा भिडेका छन् । ती सबै खेल कहाँ सम्झनलायक छन् र ? तर सन् १९९६ को विश्वकपमा दुई टिमबीचको खेल जतिको ‘क्लासिक’ अन्य त बिरलै होला । यो खेल वास्तवमै निकै नाटकीय रह्यो । यो खेललाई अजय जडेजाको प्रदर्शनप्रति सम्झिने गरिन्छ, त्यो पनि वकार युनिसविरुद्ध उनले गरेको आक्रामक प्रदर्शनका लागि । अनि बैंकटेश प्रसादले आमिर सोहेललाई बोल्ड गरेको क्षण कसरी पो भुल्न सकिन्छ र ?
चेन्नई, १९९७, इन्डिपेन्डेन्स कप
पाकिस्तान ३५ रनले विजयी
यो खेलमा पनि खासै प्रतिस्पर्धा भएनभन्दा हुन्छ । एकपक्षीय जस्तै रह्यो । यो खेलका नायक थिए, सइद अनवर । उनले विश्व कीर्तिमानी १ सय ९४ रन बनाएका थिए । यो नै यस खेललाई सम्झना गर्नुपर्ने प्रमुख कारण हो । अनवर दोहोरो शतक नजिक पनि थिए, तर उनले त्यसलाई भने आत्मसात गर्न पाएनन्, दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले आउट भएर । उनले तीन ओभरमात्र बाँकी रहेको स्थितिमा विकेट गुमाए । त्यो पनि सचिन तेन्दुलकरको बलिङमा । अनवरको यो प्रदर्शन १३ वर्षसम्म कीर्तिमानका रूपमा कायम रह्यो ।
ढाका, १९९८, इन्डिपेन्डेन्स कप
भारत ३ विकेटले विजयी
इन्डिपेन्डेन्स कपको तेस्रो फाइनलमा सबैखाले क्षण नाटकीय रह्यो । पूरा खेल नै एक प्रकारले नाटकीय रह्यो भन्दा हुन्छ । त्यतिबेला भारतले जितका लागि कीर्तिमानी लक्ष्य पछ्याएको थियो । यो जितका नायक हुन्, ऋषिकेश कानिटकर । सुरुमा लागेको थियो, सइद अनवर र इजिज अहमदले खेल पाकिस्तानको पक्षमा मोडिसकेका थिए । तर भारतका लागि सौरभ गांगुलीले सुरुमा शतक बनाए । १ सय २४ रन बनाएका उनले रोबिन सिंहसँग १ सय ७९ रनको साझेदारी गरे । कानिटकरले अन्तिम दोस्रो बलमा चौका प्रहार गरेका थिए ।
कराँची, २००४, दुईदेशीय शृंखला
भारत ५ रनले विजयी
भारतको ऐतिहासिक पाकिस्तान भ्रमणको यो पहिलो खेल थियो । यसले नै पूरा भ्रमणलाई सम्झनलायक बनाएको थियो । यो खेलमा ७ सय रन बनेको थियो । त्यसमध्ये भारतका लागि वीरेन्द्र सेहवाग र राहुल द्रविडले उत्कृष्ट इनिङ्स खेले । जवाफी इनिङ्समा पाकिस्तानका लागि इन्जमान उल–हकले शतक बनाए । भारतलाई जित दिलाउन भूमिका खेल्ने भने बलर थिए । जाहिर खान, एल बालाजी र आशिष नेहराले खेलको अन्त्यतिर उत्कृष्ट खेलेपछि पाकिस्तान जितको नजिक पुगेर पनि पराजित रहेको थियो ।
ढाका, २०१४, एसिया कप
फेरि एक अर्को दुई टिमबीचको कडा टक्कर भएको खेल । भारतले पहिले ब्याटिङ गरेर २ सय ४५ रन बनाएको थियो । यो दबाब बनाउन सक्ने स्कोर थियो । पाकिस्तानले जवाफमा व्यावसायिक पाराले खेलेको थियो र यसका लागि मोहम्मद हफिजले हिसाबकिताब गर्दै रन बटुले । तर पाकिस्तानलाई खेलमा कायम राख्ने काम भने शाहिद अफ्रिदीले गरे । पाकिस्तानलाई अन्तिम ओभरमा १० रन चाहिएको थियो, अफ्रिकीले आर आश्विनको बलमा दुई छक्का प्रहार गरे ।
द ओभल, २०१७, च्याम्पियन्स ट्रफी फाइनल
पाकिस्तान १ सय ८० रनले विजयी
के यो उत्कृष्ट खेल थियो त ? थिएन । यो त एकपक्षीय खेल थियो । यसलाई सम्झनुपर्ने कारण के हो त ? उत्तर हो, सबैभन्दा पहिला यो च्याम्पियन्स ट्रफी फाइनल हो । अनि दोस्रो, सबैखाले अनुमान गलत सावित गर्दै पाकिस्तानले उपाधि चुमेको थियो । प्रतियोगिताअगाडि उपाधिका लागि सबैभन्दा बलियो दाबेदार थियो भारत । लिग चरणमा भारतले पाकिस्तानलाई नराम्रोसँग हराएको पनि थियो । फखर जमनको शतक र मोहम्मद अमिरको घातक बलिङसामु भारत टिक्नै सकेन ।
प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०८:३८